Soo dejisan Bitdefender 2014 17.28.0.1191 Free... – Vessoft
Soo dejisan Bitdefender
Bitdefender – software a functional in la ogaado oo ka saar fayraska. Adda wuxuu bixiyaa difaac ka dhan ah furin, spyware, Trojans, Gooryaanka iyo hanjabaado kale. Bitdefender kuu ogolaanaya in aad u guurto faylasha cudurka awgii, la abuuro warar wargeys shaqada iyo dhigay scan nidaamka uu on jadwalka. software ka kooban module ka dhisay-in in u saamaxaaya in ay xannibi content la rabin oo ay ula socdaan hawlaha online carruurta. Bitdefender ayaa shaqada update ah si toos ah database antivirus ah si ay u siiyaan shaqada wax ku ool ah oo xasiloon.
Baadhista ee module spyware
Joojinta of content rabin
Bitdefender Software la xiriira: